हामी भोकले, परिवार पिरले मर्ने भए, चाँडै उद्धार होस्’
९ वैशाख, धनगढी । दार्चुलापारि भारतको धार्चुलामा एक हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । १० चैतमा सीमा बन्द भएपछि भारतबाट आएका उनीहरू धार्चुलामा नै रोकिएका हुन् ।
१४ दिनका लागि भनेर क्वारेन्टाइनमा राखेको पनि महिना दिन हुन लागिसक्यो । तर, नेपाल ल्याउने कुनै सुरसार देखिएको छैन । ‘एक महिनादेखि हामी यहाँ अलपत्र छौँ । उद्धारका लागि कसैले चासो दिएनन्’ दार्चुला मार्मा गाउँपालिका लटिनाथका दिलेन्द्र महताले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।
श्रम गरेर ल्याएको पैसा सकिन थालेको र घर परिवारमा समस्या बढ्न थालेको उनको गुनासो छ । ‘२७/२८ दिनदेखि हामी क्वारेन्टाइनमा छौँ’ उनले भने, ‘अब रोगले होइन, हामी भोकले र परिवार पिरले मर्लान् जस्तो लाग्न थालेको छ ।’
आफूहरूलाई उद्दार गरे सरकारले भनेजस्तै होम क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेको महताले बताए । ‘सीमापारि अलपत्र हुनुभन्दा घरमै सुरक्षित बन्नु जाति’ उनले भने, ‘एक महिना यहाँ बस्यौँ । घरमा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौँ ।’
कहिले घर जाने निश्चित नहुँदा जोखिम मोलेर महाकाली तर्नेको संख्या पनि बढेको छ । महता भन्छन्, आफ्नै भूमि पुग्न ज्यानको बाजी लगाउनु पर्ने हो र ?
डोटी जोरायलका शहदेव बोहराले पनि आफूहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले आफूसँग भएको पैसा पनि सकिन थालेको भन्दै उद्धार नभए थप समस्या उत्पन्न हुने गुनासो गरे । ‘ठेकेदारले पूरै पैसा दिएन’ उनले भने, ‘भएको पैसा पनि सकिन थालेको छ । तत्काल उद्धार भएन भने हामी भोकै मर्न सक्छौँ ।’
श्रीमती गर्भवती रहेको र सुत्केरी हुने दिन आएको भन्दै उनले भने ‘बुढा आमाबुबा मात्रै हुनुहुन्छ । पैसा पनि छैन । म यहाँ अलपत्र पर्दा घरमा समस्या भएको छ ।’
अहिले धार्चुलामा रहेको नेपालीहरूलाई मिनी स्टेडियम, बालुवाकोट महाविद्यालय, जौल जिबी, निगलपानी र बरममा राखिएको छ । बसाइँ लम्बिँदा भएको पैसा सकिएको छ । ‘कमाएर ल्याएको पैसा घर नपुग्दै सकिएपछि समस्या भएको छ । कतिले त आफ्नो मोबाइल बेचेर समस्या टारिरहेका छन्’ बोहराले सुनाए ।
दार्चुला ५ मार्मका धानसिंह महताले पनि तत्काल उद्धारको पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘दुई छाक खाना क्वारेन्टाइनमा दिन्छ तर, त्यसले भोक मर्दैन’ उनले भने, ‘दिउँसो र बिहान आफूले पैसा तिरेर खाजा खाने गरेका छौँ ।’
बझाड बुंगल नगरपालिका ८ कपलखेती वीरेन्द्र कामीलाई पनि ठूलो समस्या परेको छ । मंसिरमा काम गर्न भारत पुगेका उनी काम गर्दागर्दै लकडाउन भएपछि घर फर्किएका थिए । ‘घरमा समस्या थियो त्यसैले हतारमा आए’ उनले भने, ‘ठेकेदारले दिएको पाँच हजार पनि सकियो । अब कसो गर्ने ?’
आफूले कमाउन नपाउँदा घरमा चुलो बलेको छ कि छैन भन्ने चिन्ता लागेको उनले सुनाए ।
सीडीओ भन्छन्-आदेश छैन
सीमापारि रहेका नेपालीहरूले उद्धारमा पहल गर्न आग्रह गरिरहेका बेला दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले आफूलाई उनीहरुलाई नेपाल भित्र्याउने अधिकार नभएको बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको विषय हो । माथिबाट केही आदेश छैन’ उनले भने ।
देशका अधिकांश नाकामा यस्तै समस्या रहेकाले सरकारले एउटै नीति बनाएर ल्याउनसक्ने उनको भनाइ छ । भारतीय पक्षसँग समन्वय भइरहेको भन्दै उनले सीमापारि रहेका नेपालीहरूलाई कुनै समस्या नरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस साँच्चै डरलाग्दो कि मेडिकल कर्पोरेटको हल्ला ?
७० हजार वर्षको मानव सभ्यतामा कोरोना अर्थात कोभिड-१९ को बहानामा संसारलाई यति लामो समयसम्म लकडाउनको नाममा पिंजडामा थुनिएको यो पहिलोपटक हो। २० करोड मान्छे मार्ने ब्ल्याक डेथ, १० करोड मान्छे मार्ने स्प्यानिश फ्लू, ५ करोड मान्छे मार्ने प्लेग अफ जस्टियन,
नेपाली अभिनेत्रीका ‘अश्लिल फेक भिडियो’ भारतीय प्रहरीका ह्याकरबाट !
काठमाडौं । केही दिनयता नेपाली अभिनेत्रीका अश्लिल फेक भिडियो बनाएर चरित्र हत्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न थालेको सूचना पाएपछि कानुनी उपचारको खोजी गरिएको छ । नेपाल चलचित्र कलाकार संघले
सीमामा रहेका नेपाली नागरिकको मृत्यु, भारतबाट फर्किएका थिए
जनकपुर, १४ जेठ । भारतको गुजरातमा रोजगारीका लागि चार महिना अघि गएका धनुषा शहीद नगरपालिका–९ का वीरेन्द्र गुरमैता यादवको मंगलबार बिहान जटही नाकामा मृत्यु भएको छ । उनीसहित झण्डै २
← नेपाली कांग्रेस वडा ईकाई १७ द्धारा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
जिल्लावासीको हितमा माउन्टेन मगः पर्वतलाई दियो २५ सय थान सर्जिकल मास्क । →
कोरोना भाइरस : सेना परिचालन गर्न केन्द्रीय सरकारसँग कर्णाली प्रदेशले अनुमति माग्यो
कास्की काँग्रेस र वडाध्यक्षबीच बैठक
जिल्लावासीको हितमा माउन्टेन मगः पर्वतलाई दियो २५ सय थान सर्जिकल मास्क ।
पोखरा, १४ जेठ । नेपाली काँग्रेस कास्कीले काँग्रेसबाट पोखरा महानगरपालिकाका वडाहरुमा निर्वाचित वडाध्यक्षहरुसँग बैठक गरेको छ । कास्की काँग्रेसका सभापति कृष्ण केसीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा कास्की काँग्रेसका पदाधिकारी, क्षेत्रीय सभापति
पोखरा, १३ जेठ नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा मङ्गलबार २९ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । स्थपाना दिवसको अबसर पारि प्रेस युनियन अवार्डले दिइएको छ । उक्त अवार्ड अनिषा श्रेष्ठलाई
७० हजार वर्षको मानव सभ्यतामा कोरोना अर्थात कोभिड-१९ को बहानामा संसारलाई यति लामो समयसम्म लकडाउनको नाममा पिंजडामा थुनिएको यो पहिलोपटक हो। २० करोड मान्छे मार्ने ब्ल्याक डेथ, १० करोड मान्छे
कोभिड १९ : सनसिटीमा पोजिटिभ देखिएकासँग काठमाडौं उत्रिएका १५३ यात्रु कहाँ छन् ?
काठमाडौं, ३ वैशाख । काठमाडौं पेप्सिकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्टका दुई जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण पोजिटीभ देखिउपछि उपत्यका त्रासमा छ । र्यापिडली सर्ने भएका कारण सनसिटी अपार्टमेन्टलाई नियन्त्रणमा राखेर यहाँभित्र
लकडाउन वैशाख १५ सम्म बढाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं- कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको अवधि थप थरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन र १८ गतेसम्म सीमा नाका बन्द राख्ने निर्णय गरेको हो। चैत